BUYAAS Ku Saabsan - Warshadaha Steroids ee Anabolics
Luohe Hengfei Biological Technology Co., Ltd., oo laga helay 2008, waa shirkad sare oo tayo sare leh oo ku takhasusay daawooyinka kiimikada ee isku xirka wax soo saarka, R & D iyo iibka. Waxay ku taallaa Maktabadda Luohe Chemicals Park, oo ay ka go'an tahay cilmi baarista iyo horumarinta warshadaha daawo ee sare leh, bixinta alaab cusub iyo adeegyo tayo sare leh ee warshadaha dawada.
Hengfei Biotechnology waxay ku taallaa barxada adag ee biotechnology, tiknoolojiga kiimikada iyo baaritaanada falanqaynta, diiradda saarista horumarinta API-ga, dhexdhexaadinta iyo kiimikada ganaaxa, iyada oo bixinta tayada ugu sareysa CRO, adeega CMO iyo baaritaanka falanqaynta iyo adeega cilmi baarista ee shirkadaha ku jira warshadaha bayoolajiga.
Hengfei Biotechnology waxay leedahay koox maareyn khibrad leh iyo kooxda heerka koowaad ee R & D, oo ay ku jiraan khabiiro badan oo khibrad sare leh oo ku saabsan geeddi-socodka daaweynta daawooyinka daaweynta iyo daaweynta tayada daawada. Waxaa si fiican loo yaqaan iyo tartan muhiim ah oo ku saabsan kiimikooyinka kiimikada, tiknoolojiyada, qalabka mukhadaraadka, horumarinta walxaha daroogada, bioengineering, iwm. Macaamiisha shirkadaha iyo wada-hawlgalayaashu waxay soo maraan adduunka oo dhan, sameynta iskaashi dhow oo lala yeesho shirkado badan oo dawooyinka dawooyinka ku leh Waqooyiga Ameerika, Yurub, Hindiya iyo Shiinaha.
Ku adkaysiga mabda'a "Tayada Baska, Macaamiisha Ugu Horaysa, Adeegga Wanaagsan, Kaalmada Mutual", Hengfei Biotechnology Co., Ltd. waxay siisaa macaamiisha qalab fiican iyada oo loo marayo baaritaan buuxa iyo adeeg tayo sare leh.
Si daacadnimo leh ayaa u rajeyneysa in aad iskaashi la yeelatid iyo inaad gaadhsiiso mustaqbal win2win ah!
Agaasimaha shirkadda, aasaasaha shirkada
Calaamadee. Z. C
shirkad sare oo tayo sare leh oo ku takhasusay daaweynta beeraha si loogu daro wax soo saarka, R & D iyo iibka.
CRO, adeegyada CMO
Adeegyada Cilmi-baarista Tayada
iyada oo la adeegsanayo qalabka tayada biotechnology, tiknoolajiyadda kiimikada iyo baadhitaano falanqeyn ah, diiradda saaraya horumarinta API-ga, dhexdhexaadinta iyo kiimikada ganaaxa, iyada oo bixinta tayada ugu sareysa CRO, adeega CMO iyo baaritaanka falanqaynta iyo adeegyada cilmi baarista ee shirkadaha ku jira warshadaha bayoolajiga.
Waxaan leenahay shaybaarka ugu horumarsan iyo qalabka, kooxda ugu sareeysa ee R & D iyo shaqaalaha maamulka.
ISO9001: 2000 iyo Shahaadada GMP.
Isku qor si aad u hesho macluumaadka ugu dambeeyey ee ku saabsan xarunteenna caafimaadka.
Waxaad heli doontaa wararka ugu dambeeyay iyo gunnooyinka.